Banyere Nzukọ Gị Ọzọ | Martech Zone
Anọ m na-eche ọtụtụ ihe banyere nzukọ n'oge na-adịbeghị anya. Seth biputere na ihe omume ụlọ ọrụ kwa afọ kpaliri m ịmalite ịmalite post a. Dị ka onye na a azụmahịa nke otu onye ọrụ, M na na na na na-akpachapụ anya nke ole nzukọ m na-aga na-abụghị ndị na-enweta ego na-amụba.
Kwa ụbọchị, a na-akpọ m oku ịbịa nzukọ - ọkachasị otu iko kọfị ma ọ bụ nri ehihie. Ọtụtụ oge, ha bụ mmekọrịta ọkachamara ma ọ bụ ọbụlagodi na-eduga ya na ọ naghị enweta ego taa, ma echi ọ nwere ike iduga na ihe. Nzukọ ndị a bụ ndị na-akpali akpali na-akpali akpali… a brainstorming ma ọ bụ strategizing banyere a ụlọ ọrụ, ha ahịa, ma ọ bụ a na nkà na ụzụ na ịrị elu.
Nke ahụ dị nnọọ iche na mgbe m na-arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ ndị na-enwe nzukọ kwa ụbọchị. Nzukọ na ụlọ ọrụ dị oke ọnụ, na-egbochi nrụpụta ọrụ, ma na-abụkarị oge zuru oke. Nke a bụ ụdị nzukọ na-emebi ọdịbendị azụmahịa:
Nzukọ ndị emere iji chọta nkwekọrịta. Ohere inweta bụ na ị goro onye ọrụ dịịrị gị ịrụ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ị na-enwe nzukọ ịkpebiri ha… ma ọ bụ ka njọ… iwepụrụ ha mkpebi ahụ, ị ​​na-emehie. Ọ bụrụ na ịtụkwasị onye ahụ obi na ọ ga-arụ ọrụ ahụ, gbaa ya ọkụ.
Nzukọ iji gbasaa nkwekọrịta. Nke a dịtụ ntakịrị… nke onye na-eme mkpebi na-ejide. Onweghi obi ike na mkpebi ha ma tua egwu banyere nsogbu ya. Site na inwe nzukọ na ịnweta nkwenye site na otu, ha na-anwa ịgbasa ụta ahụ ma belata ịza ajụjụ ha.
Nzukọ iji nwee nzukọ. Onweghị ihe dị njọ karịa ịkwụsị ụbọchị mmadụ maka nzukọ kwa ụbọchị, kwa izu, ma ọ bụ kwa ọnwa ebe enweghị atụmatụ na ọ nweghị ihe ọ bụla na-eme. Nzukọ ndị a dị oke ọnụ maka ụlọ ọrụ, na-efu ọtụtụ puku dollar.
Nzukọ ọ bụla kwesịrị inwe ihe mgbaru ọsọ nke a na-apụghị ịchọta n’onwe ya… ikekwe ịtụgharị uche, ịkọ ozi dị mkpa, ma ọ bụ ịgbari ọrụ na inye ọrụ. Companylọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ịme iwu - nzukọ na-enweghị ebumnuche na ebumnuche kwesịrị ịbụ onye onye kpọrọ ya jụrụ.
Ọtụtụ afọ gara aga, agara m na klas ndị isi ebe ha kụziiri anyị otu esi enwe nzukọ. Nke ahụ nwere ike ịdị ka ihe ọchị, mana mmefu nzukọ ọgbakọ buru ibu dị oke mkpa. Site n'ịchọpụta nzukọ ọ bụla, ị chebere ego, oge, ma wulite ndị otu gị karịa imejọ ha.
Nzukọ ndị otu nwere onye ndu, a odeakwụkwọ (iji detuo ihe), a onye na-edebe oge (iji hụ na nzukọ ahụ bịara n'oge), na a onye nche ọnụ ụzọ (na-na isiokwu). Onye na-eche nche na onye nche ọnụ ụzọ na-agbanwe nzukọ ọ bụla ma nwee ikike ịgbanwe isiokwu ma ọ bụ kwụsị oge.
Iri nkeji gara aga ma ọ bụ karịa nke nzukọ ọ bụla ejiri ya wee mepụta otu Atụmatụ atụmatụ. Ihe omume ahụ nwere ogidi 3 - ,Nye, Gịnị, na Mgbe. Akọwaputara n'omume ọ bụla bụ onye ga-arụ ọrụ ahụ, kedụ ihe nnyefe ndị a pụrụ iji atụpụta, na mgbe ha ga-enweta ya. Ọ bụ ọrụ ndị isi ime ka ndị mmadụ zaa ajụjụ maka nnabata ha. Site na iguzobe iwu ndị a maka nzukọ, anyị nwere ike ịgbanwe nzukọ na-egbochi anyị ma malite ime ka ha rụpụta ihe.
M ga-agba gị aka ka ị chee banyere nzukọ ọ bụla ị na-enwe, ma ọ bụ ego ha na-enweta, ma ọ na-arụpụta ihe, na otu ị si achịkwa ha. M ahu nagide Calend iji hazie nzukọ m ma na-echekarị nzukọ ole m ga-enwe ma ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgwọ site na kaadị kredit iji hazie ya! Ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgwọ maka nzukọ gị ọzọ site na ụgwọ ọnwa gị, ị ka ga-enweta ya?
Tags: nke ọmanzukọihe mere nzukọusoro ihe omume
Nzacha Subdomains na Google Analytics
Feb 18, 2010 n’elekere 6:38 nke abali
Doug, m ga-achọ ịhazi nzukọ gị na gị iji kparịta nke a karịa. 🙂
Anụrụ m mgbe otu onye na-akpa ọchị na-ekwu na nzukọ ga-aga ọtụtụ ọsọ ọsọ na ụlọ ọrụ America ma ọ bụrụ na onye nhazi ahụ malitere nzukọ ahụ site na ịrịọ onye ọ bụla ka o welite aka ya ma ọ bụrụ na ha ka na-arụ ọrụ ọ bụla ha na-arụ ọrụ ụnyaahụ.
Feb 20, 2010 na 12:26 PM
Egwu post! The "niile nzukọ bụ nhọrọ" na nkà ihe ọmụma bụ n'ezie a guidepost nke a ROWE, nke m ụlọ ọrụ a na-anụ ụtọ maka a di na nwunye nke afọ ugbu a. Ya mere ọtụtụ n’ime anyị na-etinye ihe dị njọ n’ihe, dịka “oge oge”, ma ọ bụ jupụta oche n’ogologo oge. Nzukọ na oge ihu dị oke ma baa uru na ọnọdụ ziri ezi mana anyị ekwesịghị ikwe ka ihe ndị a mee ka anyị chee echiche banyere ịmịpụta ihe mgbe ọ na-enweghị isi.